महाभूकम्पको चार वर्ष : सुस्त गतिमा पुननिर्माण
परिवर्तन देवकोटा बिहिवार, बैशाख १२, २०७६, ११:५९:०० मा प्रकाशित
काठमाडौ‌ । नेपाली समुदायले महाभूकम्पको महाविपतलाई भोगेको चार वर्ष पूरा हुँदैछ । वि.सं २०७२ बैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु बनाई ७ दशमलव ६ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो ।
जसबाट हजारौँले ज्यान गुमाए भने लाखौँ घररपरिवार विस्थापित भए । अर्बौको क्षति हुन पुग्यो भने, प्राकृतिक स्रोतसाधन, धार्मिक, साँस्कृतिक एवम् पुरातात्विक संरचना लगायतका अन्य संरचनाहरु पूर्ण तथा आंशीक रुपमा क्षतिग्रस्त भए ।
काठमाडौँको धरहरादेखि गोर्खाको मनकामना, पाटनको कृष्ण मन्दिरदेखि वसन्तपुरको हनुमानढोका लगायत अन्य धेरैनै धार्मिक एवम् साँस्कृतिक महत्वका संरचनाहरु क्षतविक्षत भए । आजभन्दा तीन वर्ष अगाडी आएको प्राकृतिक विपतले नेपाल र नेपालीलाई क्षतविक्षत बनायो ।
भूकम्पपछिको आवश्यकता आँकलन प्रतिवेदन (पिडीएन)का अनुसार महाभूकम्पमा परि ८ हजार ७ सय ९० जनाले ज्यान गुमाए भने २२ हजार ३०० जना घाइते भए । यस्तै, ४ लाख ९८ हजार ८५२ निजी घर, २ हजार ६ सय ५६ सरकारी भवन र विद्यालयका १९ हजार भन्दा बढि कोठा पूर्ण रुपमा क्षति भएका थिए ।
भुकम्प पछिको पुननिर्माणको लागि सरकारले पुननिर्माण प्राधिकरण गठन गरि कामको जिम्मा दियो । प्राधिकरणले पुननिर्माणको जिम्मा लिएसँगै भूकम्पले क्षतविक्षत भएका परिवारहरुमा आशाको दियो बल्न थाल्यो । उनीहरुको दैनिकी विस्तारै सामान्य हुँदै जान थाल्यो । भूकम्प गएको ४ वर्ष क्षतविपत भएका परिवारको पीडा भने अहिले पनि ‘ज्यूँ का त्यूँ’ नै रहेको छ ।
कहाँ पुग्यो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण ?
भुकम्पपछिको पुनर्निमार्णका लागि भन्दै सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण गठन नै गरेर काम ग¥यो । पुनर्निमाण तथा विस्थापीत परिवारको पुनस्र्थापना गर्ने अख्तियार सहित पाँच वर्षे कार्य अवधि पाएको प्राधिकरणले ‘सुव्यवस्थित एवम् सुरक्षित बस्ती तथा समृद्ध समाजको स्थापना गर्ने’ लक्ष्यका साथ पुनर्निमाणको नेतृत्व लियो । तरपनि विभिन्न कारणहरु देखाउँदै पुनर्निमाणको काममा भने सन्तोषजनक नतिजा देख्न सकिएन ।
भूकम्प गएको ४ वर्षको अवधीमा प्राधिकरणले तीन कार्यकारी पाईसकेको छ । जसमा पहिलोपटक प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ)का रुपमा सुशील ज्ञवाली रहेका थिए भने दोस्रो कार्यकालमा डा. गोविन्दराज पोखरेल, र अहिले पुनः सुशील ज्ञवाली नै सिईओको रुपमा रहेका छन् । तर, ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको’ भनेझैँ भूकम्प पीडितले भने अझै पनि राहत पाउन सकेका छैनन् । पुनर्निमाणमा न्युन प्रतिशत मात्रै प्रगति हासिल गर्नु प्राधिकरणको भूमिका प्रभावकारी नहुनु नै भन्न सकिन्छ ।
भूकम्प पीडितको पुर्नवासका लागि सरकारी स्तरबाट शीघ्र काम गर्नुपर्ने प्राधिकरणको काम गर्ने गतीमा के ले बाधा बनायो ? यो अर्को कुरा हो । तर पनि हालसम्मको प्रगती हेर्दा अधिकांश प्रभावित क्षेत्रहरुमा जनस्तरको स्वस्फूर्त कामबाट बस्ती निर्माण भएको देखिन्छ । भूकम्पले क्षतविक्षत पारेको जनताको जीवनमा मलमपट्टी लगाउन भने प्राधिकरण पछि नै परेको छ ।
४ वर्षमा ३२ प्रतिशत पुननिर्माण
प्राधिकारणको हालसम्मको तथ्यांकअनुसार, भूकम्प गएको ४ वर्षको अवधीमा जम्मा ३२ प्रतिशत मात्रै पुनः निर्माण भएका छन् । भुकम्पपछिको पुननिर्माण हालसम्म ३२ दशमलव ११ प्रतिशत मात्रै भएको प्राधिकरणको तथ्याँकमा उल्लेख छ । यस्तै, लागतमा भने प्राधिकरणले सुरुको कुल लागत अनुमान ९ खर्ब ३८ अर्बको २५ दशमलव २६ प्रतिशत र हालसम्म विनियोजित बजेटमध्ये ५१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, हालसम्म पुननिर्माणका लागि ४ खर्ब ६३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेपनि खर्च भने २ खर्ब ३७ अर्ब मात्रै भएको छ ।
यस्तो छ पुननिर्माण तथ्यांक
हालसम्म प्राधिकरणले जम्मा ६ सय ४३ स्वास्थ्य सस्थाहरु पुननिर्माण गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, १ सय ४५ स्वास्थ्य सँस्थाहरु पुनर्निमाण तथा प्रवलीकरण भैरहेका छन् । १ हजार १ सय ९७ स्वास्थ्य सस्थाहरु पुनर्निमाण तथा प्रवलीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको प्राधिकरणले भूकम्प गएको चार वर्षसम्ममा ४ सय ९ भवनहरु बनाउन सुरु भएकै छैन ।
प्राधिकरणले अहिलेसम्म ४ हजार १ सय ७२ शैक्षिक सँस्थाहरु पुनर्निमाण तथा प्रवलीकरण गरेको जनाएको छ । आफ्नो कार्य अवधि भित्रमा कुल ७ हजार ५ सय ५३ शैक्षिक सस्था पूनर्निमाण गर्ने लक्ष्य लिएको प्राधिकरणले अहिले २ हजार ५ सय ६ शैक्षिक सस्थाहरु पुननिर्माण भैरहेका छन् ।
त्यस्तै, हालसम्म २ सय ४८ सरकारी भवनहरु पुनर्निमाण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कुल ४ सय १५ सरकारी भवन पुनर्निमाण गर्ने लक्ष्य लिएको प्राधिकरणले अहिले १४५ सरकारी भवनहरु पुनर्निमाण तथा प्रवलिकरण भैरहेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार अहिले २२४ साँस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निमाण भैरहेको छ । कुल ७५३ साँस्कृतिक सम्पदा पुनर्निमाणको लक्ष्य लिएको प्राधिकरणले भूकम्प गएको ३ वर्ष वित्दा सम्ममा २ सय १२ साँस्कृतिक सम्पदा पुनर्निमाण सम्पन्न गरेको छ ।
प्राधिकरणले अहिले ६ सय ७० खानेपानी पूर्वाधार पुननिर्माण भैरहेको जनाएको छ ।
३ हजार २ सय १२ खानेपानीका पूर्वाधार पुनर्निमाण गर्ने लक्ष्य लिएको प्राधिकरणले हालसम्म ७ सय ९१ खानेपानीका पूर्वाधारहरु पुनर्निमाण सम्पन्न भएको जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, १ सय १८ भवन पुनर्निमाण हुँदैछन् । प्राधिकरणले ३ सय ८३ भवनहरु पुननिर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको प्राधिकरणले हालसम्म सुरक्षा निकायका ९४ भवनहरु पुननिर्माण सम्पन्न गरेको बताएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका अनुसार, विनाशकारी भूकम्पबाट १४ जिल्लाहरुका ८ लाख २३ हजार ४६० घरहरु अतिप्रभावित छन् भन १८ जिल्लाहरुका १ लाख ७३ हजार १ सय २२ घरधुरी कम प्रभावित छन् । भूकम्प आएको ३ वर्ष वितिसक्दा ३ लाख ८२ हजार ४३ निजी आवासहरु निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने, ६ लाख १२ हजार १ सय ५२ घरहरु निर्माणको क्रममा छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार, निजी आवास पूनर्निमाणका लागि कुल ८ लाख २४ हजार ४ सय ५२ घरधनीले अनुदान पाएका छन् । जसमध्ये अति प्रभावित १४ जिल्लाबाट ७ लाख २४ हजार २ घरधनीहरुले अनुदान पाएका छन् भने कम प्रभावित १७ जिल्लाबाट १ लाख ७ सय ५० घरधनीले अनुदान पाएका छन् ।
प्रवक्ता भन्छन्, सन्तोषजनक काम भयो
प्राधिकरणले नियमित तथा सन्तोषजनक काम गर्दै आएको बताउँदै आएपनि भूकम्प पीडितमा भने सन्तोष देखिएको छैन । प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे ‘भूकम्पपछिको पुननिर्माणको कामको प्रगति हेर्दा सन्तोषजनक रहेको बताउँछन् ।’ जनतापाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘भुकम्पपछिको सम्पदा पुननिर्माण बाहेक सबैको काम राम्रो छ, अबको केही समयमा नै त्यो पनि पुरा गर्छौँ ।’
भूकम्पका कारण धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक एवम् सार्वजनिक महत्वका धेरै सम्पदाहरु क्षतिग्रस्त बने । सम्पदाको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै पुरातात्विक हिसाबले निर्माण गर्दा ढिला भएको उनले बताए ।यता, भूकम्पपछिको पुननिर्माणको क्रममा भने पीडितले विभिन्न झमेलाहरुको सामना गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले नीजि आवास निर्माणका लागि व्यवस्था गर्ने भनेको सहुलीयत कर्जा पनि सर्वसुलभ हुन सकेको छैन । विना धितो कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएपनि यो लिनका निम्ति प्रक्रिया निकै झन्झटीलो रहेको पीडितको गुनासो रहेको छ ।
गुनासो खोज्दै सुनुवाई संंयन्त्र
प्राधिकरणले भूकम्प पछिका भवनहरु पूननिर्माणलाई सहज हुने भन्दै पीडितको गुनासो सम्बोधनका लागि गुनासो सुनुवाई संयन्त्र बनाएको थियो । भूकम्प गएको ४ वर्ष वित्दापनि सुनुवाई संयन्त्र भने गुनासो संकलनमा मात्रै केन्द्रित छ तर गुनासो सम्बोधन भने प्रभावकारी भएको पाईएको छैन । गुनासो सुनुवाईको अन्तिम समय बैशाख मसान्त सम्म रहेको छ । त्यो अवधिमा छुटेका अथवा अन्य कारणले अल्झिएर बसेका लाभग्राहीहरुको गुनासो सुन्ने र सम्बोधनका लागि विभिन्न निकायसँग छलफल चलाईने प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
त्यस्तै, निजी आवास पुननिर्माणका लागि सरकारले विना धितोमा सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था समेत मिलाएको छ । तर पनि लाभग्राहीले भने अहिलेपनि सहुलियत ऋण पाएका छैनन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, हामीले यसको लागि पनि व्यवस्था मिलाएका छौँ, सहुलियत ऋण लिन सहज वातावरण मिलाउनका लागि राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित बैंकका कार्यकारी अधिकृतहरुसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।
जनतालाई बैंकिङमा जोड्ने माध्यम नै हामी हौं बिहिवार, फाल्गुन ३०, २०७५, १२:३०:००
घटेन ट्राफिक नियम उल्लंघन, दैनिक १५ सय कारवाही प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘कति भिआईपी सवारीका चालक पर्छन्, कति कुनै कलाकारका । या अरु । तर धेरै जसो लेन अनुशासन पालना नगरेका कारण कारवाहीमा पर्छन् ।’ उनका अनुसार, पछिल्लो समय लेन अनुसाशन उल्लङ्घन गर्नेहरुको दर भयावह स्थीतीमा छ । शनिवार, चैत्र १६, २०७५, १६:१५:००
बजेटको आकार होईन, खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ शुक्रवार, बैशाख २०, २०७६, १४:५५:००